Izinhlobo zamabhizinisi kanye nezibopho zentela – The Olifants News
HomeCOMMUNITYIzinhlobo zamabhizinisi kanye nezibopho zentela
Ingabe uyazazi yini izibopho zentela zebhizinisi lakho? Kuloluhlu lwanamhlanje sichushisa osomabhisinisi abancane ngezinhlobo zamabhizinisi kanye nezibopho zentela zalawo mabhizinisi. Kodwa ngaphambi kokuthi siqhubeke, sizoqala ngokuphendula lombuzo osemqoka:
Ingabe kubaluleke ngani ukukhokha intela?
Ukukhokha intela kusiza usomabhizinisi ukuthi ahlale anegama elihle nomqoqi wentela uSARS. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uyayikhokha intela, futhi uhambisa nemininingwane efanele emayelana nebhizinisi lakho. Uma unegama elihle ube sethubeni elihle lokwenza ibhizinisi nohulumeni, noma uthole uxhaso lwezezimali.
Izinhlobo zamabhizinisi ofanele uwazi:
Ibhizinisi elisebenza ngemikhiqizo emincane futhi elabantu abazisebenzayo. Kubandakanya namabhizinisi angahlelekile. Asikho isidingo sokubhalisa ku-Company and Intellectual Property Commission (CIPC). Bhalisela iNtelangeniso lomuntu siqu (PIT) bese minyaka yonke udalula inzuzo emaphepheni okubuyisa intelangeniso lomuntu siqu (ITR12). Lapho kudingeka ukuthi ukhokhele uSARS, kumele ukwenze lokho ngaphambi kosuku olungumnqamulajuqu oluvela kuSaziso sokuHlola (ITA34).
Izinkampani ezizimele zikahulumeni noma ama-Close Corporation Ibhizinisi ezihlelekile elidinga ukubhaliswa ku-CIPC bese lithola inombolo yokubhalisa inkampani. Inkampani izimele, ayihlangene nomnikazi wayo kanti umnikazi wayo kumele athumele amaphepha akhe eNtelangeniso loMuntu siqu (ITR12). Bhalisela i-VAT uma ufaneleka Bhalisela i-PAYE, uma ufaneleka kanye nezintela ezikhethekile zamabhizinisi amancane: iNtelanzuzo, SBC noma i-ETI.
Umfelandawonye usunguleka uma iqembu labantu, abathanda izinto ezifanayo, behlangana ukuze bafeze okungaba iphupho eliphathelene nezomnotho, ezenhlalakahle noma okuphathelene nesiko, noma okufana nezitokofela, amabhizinisi omphakathi ezolimol. Umfelandawonye kumele ubhalise ku-CIPC. Imifelandawonye itheliswa njengezinkampani.
Tags:Company and Intellectual Property Commission (CIPC), PAYE, SARS, Tax, The Olifants News, VAT